Sida Loo Isticmaalo IGTV: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loo Isticmaalo IGTV: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha
Sida Loo Isticmaalo IGTV: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha
IGTV (Instagram TV) waxay u ogolaataa summada inay abuuraan taxane muuqaal ah oo u gaar ah Instagram.
Waa fursad aad u wanaagsan:
La shaqee saamileyaasha
Horumari istaraatiijiyada suuqgeynta ee Instagram
… iyo waxyaabo kale oo badan!
Laakiin sidee u abuurtaa kanaalka IGTV? Maxay yihiin siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu isticmaali karto ganacsigaaga?
Aan u dhex galno jawaabaha, oo aan ogaano sida aad IGTV uga dhigi karto inay u shaqeyso sumaddaada.
Fiiro gaar ah: Bishii Oktoobar 2021, Instagram waxay isku dartay IGTV iyo fiidiyooga quudinta qaab muuqaal ah oo keliya: Fiidiyowga Instagram. Tabaha astaanta guud ee IGTV waxaa lagu beddelay tab Fiidiyow. Dhammaan fiidiyowyada Instagram-ka hadda waxay noqon karaan ilaa 60 daqiiqo, iyo astaamaha tafatirka boostada ee caadiga ah ayaa diyaar u ah nuxurka muuqaalka dheer. Wax badan ka baro Instagram Video
Bonus: Soo deji liis hubin bilaash ah taasi waxay muujineysaa tillaabooyinka saxda ah ee saameynaha jirdhiska loo isticmaalo inuu ka koro 0 ilaa 600,000+ taageerayaasha Instagram iyada oo aan lahayn miisaaniyad iyo qalab qaali ah.
IGTV waa kanaal muuqaal ah oo qaab-dheer laga heli karo Instagram-ka iyo sida app-ka taagan.
Instgram-ka ayaa muuqaalkan bilaabay Juun 2018. Waxa ay siinaysaa summadaha fursad ay ku sameeyaan fiidiyowyo ka dheer Sheekooyinka Instagram iyo qoraallada caadiga ah.
Dhab ahaantii, isticmaalayaasha la xaqiijiyay waxay soo dhejin karaan fiidiyowyada IGTV ilaa hal saac. Isticmaalayaasha joogtada ahi waxay soo gelin karaan 10 daqiiqo oo fiidyowyo dhaadheer ah-wali aad uga dheer fiidyaha caadiga ah!
Sanadka 2019, Instagram ayaa sidoo kale u ogolaatay hal-abuurayaasha inay soo dhejiyaan hal-daqiiqo horudhac ah oo fiidiyowyadooda IGTV quudintooda si loo horumariyo helitaankooda. Taasi waxay ku fiican tahay helitaanka dareenka dhagaystayaashaada iyaga oo aan soo dejin abka.
Instagram dhawaanahan waxay soo bandhigtay muuqaalka taxanaha IGTV. Tani waxay u oggolaanaysaa abuurayaashu inay sameeyaan fiidiyowyo taxane ah oo joogto ah si loogu sii daayo caddayn joogto ah ( toddobaadle, bille, iwm).
Hadda waxaad si fudud uga daawan kartaa taxanaha IGTV hal-abuurayaasha aad jeceshahay oo waxaad heli kartaa ogeysiin marka ay jiraan qaybo cusub.
- Instagram (@instagram) Oktoobar 22, 2019
Ka fakar sida taxane ah oo aad ku arki lahayd telefiishanka ama YouTube-laakin dhammaan Instagram-ka.
Noocyada ayaa ilaa xad gaabis u ahaa qaadashada IGTV dhowr sababood dartood. Madaxa iyaga ka mid ah: kharashyada sare iyo wakhtiga maalgashiga loo baahan yahay si loo soo saaro muuqaalo bulsho oo qaab-dheer.
Laakiin haddii aad si sax ah u sameyso, IGTV dhab ahaantii waxay noqon kartaa hab fantastik ah oo lagu dhisayo ka-qaybgalka astaantaada. Akhri si aad u ogaato sida.
Sida loo isticmaalo IGTV
U fiirso fiidiyowgan Hootsuite Academy muuqaal guud oo degdeg ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo IGTV. Marka aad dhammayso, sii akhri si aad u hesho tilmaamo sax ah (oo leh muuqaallo) xagga hoose:
Sida loo sameeyo kanaalka IGTV
Waxay ahaan jirtay haddii aad rabto inaad fiidiyoow ku dhejiso IGTV waxaad u baahan tahay inaad abuurto kanaalka IGTV. Si kastaba ha noqotee, Instagram ayaa tan iyo markaas meesha ka saartay astaantaas.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u abuurto akoon IGTV hadda waa akoon Instagram ah. Koontadaadu waxay kuu ogolaanaysaa inaad fiidyowga ku dhejiso IGTV adoo isticmaalaya app Instagram ama IGTV app.
Haddii aad tan akhrinayso, waxaa jirta fursad wanaagsan inaad hore u lahayd akoon Instagram ah. Haddii aadan samayn, taasi waa caadi! Waa kuwan tilmaamaha tooska ah ee Instagram ka sida loo sameeyo akoon
Sida loo soo geliyo fiidiyowga IGTV
Soo dejinta fiidiyowga IGTV waa mid aad u fudud - laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo.
Sida loo soo geliyo iyo IGTV video ka Instagram
1. Taabo batoonka + xagga hoose ee wararkaaga.
2. Dooro muuqaal 60 ilbiriqsi ama ka badan oo taabo Next.
3. U dooro wadaag sida Muuqaal Dheer. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso fiidiyowga dhererka buuxa ee IGTV, halka qayb gaaban oo fiidiyow ah lala wadaago quudintaada Instagram. Taabo Sii wad.
4. Ka dooro sawirka daboolka fiidyahaaga mid ka mid ah xayndaabkiisa. Taas beddelkeeda, waxaad ka dooran kartaa sawir gallerykaaga. Taabo Xiga.
5. Buuxi ciwaanka iyo sharaxaada fiidyahaaga IGTV. Waxaad sidoo kale hadda haysataa ikhtiyaarka ah Ku dhaji Horudhac Fiidiyowgaaga ku jira war-bixintaada iyo Ka dhig mid ka muuqda Facebook-ga haddii aad rabto inaad ka gudubto kor u qaad.
Waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad halkan ku darto fiidiyowga taxanaha IGTV. Haddii aanad hore u lahayn taxane IGTV, ha werwerin. Waxaan ku tusi doonaa sida hoos ku qoran.
Markaad dhammayso buuxinta cinwaankaaga iyo sharraxaadda. Taabo Post dhanka sare ee midig. Voila! Waxaad hadda soo dhejisay muuqaal IGTV abkaaga Instagram-ka!
Sida IGTV looga soo geliyo muqaal IGTV
1. Taabo + badhanka midigta kore.
2. Dooro muuqaal 60 ilbiriqsi ama ka badan oo taabo Xiga.
3. Ka dooro sawirka daboolka fiidyahaaga mid ka mid ah xayndaabkiisa. Taas beddelkeeda, waxaad ka dooran kartaa sawir gallerykaaga. Taabo Xiga.
4. Buuxi ciwaanka iyo sharaxaada fiidyahaaga IGTV. Waxaad sidoo kale hadda haysataa ikhtiyaarka ah Ku dhaji Horudhac Fiidiyowgaaga ku jira war-bixintaada iyo Ka dhig mid ka muuqda Facebook-ga haddii aad rabto inaad ka gudubto kor u qaad.
Markaad dhammayso buuxinta cinwaankaaga iyo sharraxaadda. Taabo Post dhanka sare ee midig. Voila! Waxaad hadda soo dhejisay muuqaal IGTV abkaaga IGTV!
Sida loola socdo waxqabadkaaga IGTV
Si aad u aragto falanqaynta IGTV ee Instagram:
Taabo muuqaalka aad rabto inaad falanqeyso.
Taabo seddexda dhibcood ee jiifka ah (iPhone) ama toosan (Android) ee ku yaala gunta hoose ee muuqaalka.
tubada Daawo Aragtida
Appka dhexdiisa, waxaad ka arki kartaa:
Farriimaha tooska ah
Halka In-app Insights ay ku siin doonto aragti degdeg ah oo ku saabsan sida muuqaalku u shaqeeyo, ma fududa in la barbar dhigo inta ka hadhay macluumaadkaaga Instagram-ama xataa fiidyahaaga IGTV intiisa kale. Si aad u hesho aragti dhamaystiran oo ku saabsan waxqabadkaaga IGTV, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso qalabka maamulka warbaahinta bulshada ee dhinac saddexaad sida Hootsuite.
Gudaha Hootsuite Impact, waad awoodaa u fiirso falanqayntaada IGTV oo ay weheliso dhammaan macluumaadkaaga kale ee Instagram. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan halbeegyada waxqabadka IGTV ee aad ka heli karto abka, oo lagu daray cabbirka ROI-ga la beddeli karo oo kuu oggolaanaya inaad Go'aanso fiidiyowyada IGTV ee ku siinaya soo celinta-maalgelinta ugu fiican ku salaysan yoolalkaaga ganacsi.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in habbee habka loo xisaabiyo heerka hawlgelintaada, haddii aad doorbidayso inaad u xisaabiso si ka duwan Instagram-ka (tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa inaad kaydiso oo kaliya faallooyinka ku tiriso "ka-qaybgal").
Saamaynta Hootsuite waxay mudan tahay inaad hubiso haddii aad raadinayso aragti dheeri ah oo ku saabsan waxqabadka ganacsigaaga Instagram, sida ay u shaqeyso marka la barbardhigo shabakadaha kale ee bulshada, iyo sida ay uga qayb qaadato ganacsigaaga xaggiisa hoose.
Sida loo sameeyo taxane IGTV
Haddii aad rabto inaad ku abuurto taxane IGTV abkaaga Instagram-ka ama abkaaga IGTV, tillaabooyinka waxay noqonayaan isku mid.
Waa kuwan sida loo sameeyo taxanaha IGTV:
1. Hubi inaad joogto daaqada aad ku buuxinayso ciwaankaaga iyo sharaxaadaada. Taabo Ku dar Taxanaha
2. Fiiri Abuur Taxanahaaga Koowaad.
3. Buuxi taxanahaaga cinwaankiisa iyo sharraxaaddiisa. Kadib taabo calaamad buluug ah dhinaca sare.
4. Hubi in taxanaha aad rabto in fiidyahaagu qayb ka noqdo la doortay. Kadib taabo Dhammaad dhinaca sare.
Waa kaas! Waxaad hadda abuurtay taxane cusub oo IGTV ah.
IGTV muuqaalada muuqaalada
Waa kuwan dhammaan macluumaadka gaarka ah ee fiidiyowga aad uga baahan tahay fiidyahaaga IGTV:
Faylka qaabka: MP4
Dhererka fiidiyowga: Ugu yaraan 1 daqiiqo ayaa dheer
Dhererka fiidyaha ee ugu badan marka la soo gelinayo moobaylka: Daqiiqado 15
Dhererka fiidyaha ugu badan marka la soo gelinayo shabakada: 1 saac
Saamiga toosan: 9: 16
Saamiga dhinaca toosan: 16:9
Heerka ugu yar: 30 FPS (Foom halkii ilbiriqsi)
Xallinta ugu yar: XIUMX pixels
Cabbirka faylka ugu badan ee fiidiyowyada 10 daqiiqo ama ka yar: 650MB
Cabbirka faylka ugu badan ee fiidiyowyada ilaa 60 daqiiqo: 3.6 GB.
Baaxadda cabbirka sawirka: 420px by 654px (ama 1:1.55 saamiga)
tip Pro: Ma bedeli kartid sawirkaaga daboolka ka dib markaad soo geliyaan, markaa iska hubi inuu ku fiican yahay ka hor intaadan samayn.
5 siyaabood oo loo isticmaalo IGTV ganacsiga
Hoos waxaa ah 5 fikradood oo loogu talagalay fiidiyowyada IGTV ama xitaa taxane oo aad u abuuri karto astaantaada.
Abuur fiidiyowyo casharro ah
Hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu dhiso ka-qaybgalku waa iyada oo loo marayo fiidiyowyo waxbarid anfacaya.
Fiidiyowyadan sida-looga sameeyo waxay dabooli karaan mowduucyo kala duwan oo kala duwan oo ku jira warshadahaaga. Tusaale ahaan, waxaad tidhaahdaa waxaad lahayd calaamad fayow. Waxaad samayn kartaa taxane diirada saaraya casharrada jimicsiga, ama laga yaabee mid ku saabsan cuntooyinka caafimaadka leh.
Haddii ururkaagu iibiyo badeecad, waxaad samayn kartaa sida-fiidyaha loo sameeyo oo diiradda lagu saarayo sida loo isticmaalo alaabtaas. Waxaa jira tiro badan oo suurtagal ah oo loogu talagalay taxanaha IGTV ee weyn ee sumaddaada!
Marti geli kulanka Q&A
Su'aal iyo jawaab (Q&A) oo lala yeesho dhagaystayaashaada waa hab fiican oo looga jawaabo su'aalaha muhiimka ah ee ay taageerayaashu qabaan.
Sidoo kale waa fursad weyn inaad ku soo bandhigto qaar ka mid ah hoggaanka fikirka adag ee warshadahaaga.
tip Pro: Ku dheji boostada Instagram-ka quudintaada iyo Sheekada aad ku horumarinayso kulankaga Q&A ka hor. U hubso inaad waydiiso taageerayaashaada su'aalo markaa. Waad isticmaali kartaa inta lagu jiro duubista IGTV!
Tani waa hab fiican oo lagu dhiso hufnaanta astaantaada. Adiga oo siinaya dhagaystayaashaada in ay eegaan sida shirkadu u shaqeyso - ha noqoto adiga oo waraysanaya asxaabtaada ama si fudud u socdaalaya goobtaada shaqada - waxaad calaamadeeysaa daawadayaasha.
Taasi waxay keenaysaa kalsooni badan oo u dhaxaysa dhagaystayaasha iyo ururkaaga. Aaminaada sumadduna waa shay muhiim u ah wax walba laga bilaabo suuqgeyn ilaa iib.
Martigelinta dhacdo sida shirweyne ama siminaar? La wadaag taas daawadayaashaada kanaalkaaga IGTV!
Tani waa fursad weyn oo lagu oggolaanayo kuwa aan iman karin fursad inay "ka qaybgalaan" si dhab ah. Daawadayaashaadu way u mahadcelin doonaan, waxaadna siin kartaa waxa ay ku lug yeelan karaan.
Marti galiso bandhig hadal
Weligaa ha ku riyoon inaad aragto magacaaga oo hoostiisa calanka "Bandhigga Caawa"? Hadda waad awoodaa (nooc)!
Waxaad ku martigelin kartaa bandhig hadal IGTV kaaga kaas oo ku salaysan astaantaada. Marti ku hay kuwa saamaynta ku leh iyo hogaamiyayaasha fikirka ee warshadahaaga. Hal-ku-dheg ku saabsan wararka warshadaha. Haddii aad dhab ahaantii hammi leedahay, waxaad isku keeni kartaa asxaabtaada oo aad samayn kartaa koox-guri ah.
(Hagaag, malaha ha samayn kii u dambeeyay.)
Talooyin IGTV iyo dhaqamada ugu wanaagsan
Ka gudub fiidyahaaga kor u qaad
Mar kasta oo aad bilowdo inaad soo geliso kanaal cusub, waxa fiican inaad la socodsiiso taageerayaashaada kanaalada kale waxa aad qabanayso, haddii ay dhacdo inay iyaguna halkaas kugu raacaan.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay IGTV, maadaama dadka qaar ay ku qasbanaan doonaan inay soo dejiyaan app cusub si ay u arkaan macluumaadkaaga.
IGTV waxay bixisaa dhowr ikhtiyaar oo xayeysiis ah oo kala duwan:
Fiiri oo ku xidh fiidyowga IGTV ee Sheekooyinkaaga Instagram-ka (la xaqiijiyay ama isticmaalayaasha ganacsiga oo keliya)
Wadaag hal daqiiqo oo horudhac ah oo fiidiyowyadaada IGTV ah quudintaada Instagram-ka iyo astaantaada (isticmaalayaasha ayaa lagu wargelin doonaa Daawasho wacan IGTV)
La wadaag fiidiyowyada IGTV bogga Facebook ku xiran
Ingram ka baxsan, tixgeli inaad ku darto wicitaanada kanaalkaaga IGTV ee:
Warside iimayl ah
U hagaaji daawashada aamusan
Fursadaha ayaa ah haddii dadku ay ku daawanayaan muuqaalkaaga abka IGTV, waxay daari doonaan codkooda. Laakiin xitaa fiidiyowyada si toos ah ugu ciyaara app-ka si ay u “dhawaaqaan”.
Oo haddii aad ku wadaagayso fiidyahaaga Sheekooyinkaaga Instagram-ka ama quudintaada, dadka intiisa badan ma yeelan doonaan codkooda.
Markaa hubi in fiidyowgaaga loo hagaajiyay inuu ku ciyaaro dhawaaq la'aan-ie, ama macno ayay samaynaysaa dhawaaq la'aan, ama waxay leedahay qoraal hoosaadyo si fudud loo arki karo. Clipomatic ayaa kaa caawin kara arrintan.
Ku dar macluumaadka ugu muhiimsan xagga hore
Dadku waxay si degdeg ah u dhex maraan quudkooda. Kaliya waxaad haysataa daaqad yar oo aad ku soo jiidato dareenkooda - ilaa hal daqiiqo haddii aad nasiib leedahay, laakiin 15 ilbiriqsi waxay u badan tahay bartilmaameedka dhabta ah.
Markaa iska hubi in fiidiyowgaaga IGTV uu ku xidho daawadayaashaada sida ugu dhakhsaha badan. Ha u ogolaanin dareenkooda in uu simbiriiro ama ha siin sabab ay ugu sii gudbaan shayga xiga.
Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii aad la wadaagayso aragti hordhac ah quudintaada Instagram, halkaasoo daawadayaasha lagu dhiirigelin doono inay "ka sii daawashadaan" IGTV hal daqiiqo ka dib.
Ka fakar daqiiqadda ugu horreysa ee fiidyahaaga horudhac u ah boostada blog. Si kasta oo uu fiidyahaagu u iftiimiyo una soo jiidanayo, waxaad u baahan doontaa inaad ka jawaabto su'aalaha soo socda:
Muxuu ku saabsan yahay muuqaalkan?
Maxaad u ilaalinaysaa?
Ikhtiyaar: yuu u yahay muuqaalkan?
Ikhtiyaar: intee ayay ahaan doontaa?
Ka jawaabista su'aalahan sida ugu dhakhsaha badan waxay dammaanad qaadi doontaa aragtiyo dheer oo tayo sare leh.
Isticmaal hashtagyada khuseeya sharaxaaddaada
Ka shaqaynta raadinta IGTV waxay heshay xoogaa naqdi ah. Laga bilaabo Abriil 2020, waxaad kaliya raadin kartaa profiles halkii aad ka raadin lahayd fiidiyowyo mowduuc gaar ah (ka fikir: sidaad u raadiso fiidyowga YouTube).
Laakiin Instagram ayaa la sheegay in ay ka shaqeyneyso sidii ay u beddeli lahayd
Dhanka kale, hubi in fiidyowyadaada ay sidoo kale arkaan kuwa aan raacsanayn adiga oo ku daraya hashtag la xidhiidha sharraxaada. Fiidiyowyadaadu waxay ka soo muuqan doonaan bogga hashtag ee u dhigma ee Instagram, halkaas oo dadka raacaya hashtag-kaas ay ka heli karaan macluumaadkaaga.
Kaliya dheji nuxurka damaanad qaadaya qaab dheer
IGTV kaliya maahan meel la iskaga gudbayo dhajinta Sheekooyinkaaga Instagram-ka. Haddii aad rabto in dadku kugu raacaan labada channel, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay haystaan ​​sabab wanaagsan oo ay sidaas ku sameeyaan.
Tani waxay ka dhigan tahay horumarinta wax cusub oo ku habboon qaab dheer. Iyadoo Sheekooyinkaaga Instagram loogu talagalay inay ku habboonaadaan 15-ilbiriqsi clips, maxaad ku samayn lahayd in ka badan 15 ilbiriqsi? Ku tiirso booskaas oo maskaxda ku hay.
Sida YouTube-ka, qoraalka qaab-dheer ee wax-barashada ayaa caan ku ah IGTV. Laakiin qaar ka mid ah noocyada ayaa xitaa horumariyay taxanaha TV-ga oo dhan ee app-ka.
Sida iska cad waxaad doorato inaad sameyso waxay kuxirantahay miisaaniyadaada iyo astaantaada, laakiin halkan waxaa ah fikrado muuqaal ah oo qaab-dheer ah si aad u bilowdo.
Isticmaal midabada summadaada, xarfaha, mawduucyada, iwm.
Sababtoo ah waa barnaamij ka duwan macnaheedu maaha inaad soo bandhigayso calaamad ka duwan. Waxay horeba u noqon kartaa waayo-aragnimo soo jiidasho leh inaad ka tagto hal app si aad u daawato nuxur kale, markaa ka dhig khibradda sida ugu fudud ee suurtogalka ah taageerayaashaada. U sheeg in aad isku da' tihiin, kaliya kanaal kale.
Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ku dheggan tahay isla midabyo, cod, iyo gariir sida caadiga ah. Gunnada: tani waxay kaa caawin doontaa waxa ku jira IGTV inay ku habboonaato quudintaada sidoo kale.
Waqti u ilaali maareynta joogitaankaaga Instagram adoo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard waxaad ka jadwalaysan kartaa oo aad si toos ah ugu daabici kartaa qoraalada Instagram, ka hawlgeli dhagaystayaasha, cabbiri kartaa waxqabadka, oo aad maamuli kartaa dhammaan muuqaallada kale ee warbaahinta bulshada. Isku day bilaash maanta.
Isku-dhafka Foursquare iyo Factual, CEO Shim si uu u hoggaamiyo shirkad la isku daray
Mustaqbalka aqoonsiga ee adduun aan cookie-ka lahayn